केवल घण्टा छ? बिना पसिना।
यदि तपाईंले परीक्षण गर्नु अघि रात सम्म विलम्बित छ भने पूर्णतया डरलाग्दो महसुस गर्न आवश्यक छैन, यद्यपि तपाईंको समय व्यवस्थापन कुञ्जी केहि वांछित हुन छोड्छ। यद्यपि तपाईं लामो समय सम्मको दीर्घकालीन मेमोरीमा काम गरिरहनु भएको छैन, तपाइँ अझै पनि परीक्षा पास गर्न केहि सिक्न सक्नुहुन्छ, भले पनि तपाईंले अघि मात्र रात अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ।
केही ब्रेन खाना खाओ।
ब्रेन खाना निश्चित रूपमा कोको पाउहरू होइन।
रातो खानेकुराको लागि केही अण्डा माथि उठाउनुहोस्, अय्यका साथ केहि हरी चिया पिउन, र अँध्यारो चकलेट को केहि टुक्राहरु संग यो पछ्याउनुहोस्। आफ्नो दिमागको कार्यक्षमता बढाउनुहोस् यसलाई प्रदान गर्न को लागी यो ठीकसँग कार्य गर्न आवश्यक छ। साथै, तपाईंले पढ्न सुरु गर्नु अघि केहि खाने खाएर, तपाईं भोका (र विचलित) प्राप्त गर्न कम परीक्षण गर्नुहुनेछ र प्रारम्भिक अध्ययन छोडेर छोड्नुहोस्।
तपाईंको शारीरिक आवश्यकताको लागि तयारी गर्नुहोस्।
स्नानघरमा जानुहोस्। पेय पाउनुहोस्। सान्त्वना लिनुहोस्, तर पनि पनि सहजली (तपाइँ सोच्न चाहनुहुन्न नि।) सबै चीटहरू सडक र पछाडि तल दौडेर आफ्नो प्यान्ट बाहिर जान्नुहोस्। म गम्भीर छु। तपाईंको अगाडी साईट-डाउन अध्ययन सत्रको लागि तपाईं आफ्नो शरीरलाई तयार पार्नुहोस्, त्यसैले तपाईसँग उठ्न र कहीं जाने को लागि बहाना छैन।
तपाईंको अध्ययन सामग्री व्यवस्थित गर्नुहोस्।
तपाईंले लिनु भएको परीक्षण सम्बन्धित नोटहरू - नोटहरू, ह्यान्डआउटहरू, क्विजिजहरू, पुस्तक, परियोजनाहरू - र तपाईंको डेस्क, फ्लोर वा बिदामा सावधानीपूर्वक बाहिर राख्नुहोस्, त्यसोभए तपाईंले के साथ काम गर्न के देख्न सक्नुहुन्छ।
टाइमर सेट गर्नुहोस्
तपाईं 45 मिनेटको वृद्धिमा अध्ययन गर्न जाँदै हुनुहुन्छ र पछि5मिनेट ब्रेकहरू। यदि तपाईं घण्टा र घण्टाको लागि अनिश्चितकालीन अध्ययन गर्न प्रयास गर्नुहुन्छ भने, तपाईंको दिमाग ओवरलोड हुनेछ र तपाईंले अध्ययनमा ध्यान केन्द्रित गर्न काम गर्नुपर्नेछ। मिनी इनामहरू (ब्रेकहरू) सँग साना लक्ष्यहरू राम्रोसँग राम्रो छ ताकि तपाईं लामो समयसम्म लामो समयसम्म सामग्री सिक्न आवश्यक हुन सक्नुहुनेछ।
त्यसोभए, 45 मिनेटको लागि एक टाइमर सेट गर्नुहोस् र जाँदै जानुहोस्।
तपाईंको अध्ययन गाइड पालन गर्नुहोस्
यदि तपाइँले शिक्षकले तपाईलाई अध्ययन गाइड दिनुभएको छ भने त्यसपछि त्यसमा पढ्न सकेसम्म सकेसम्म सुरू गर्नुहोस्। तपाईंको गाइड, ह्यान्डआउट, क्विजिज, बुक, आदिलाई हेर्नुहोस् जब तपाईं मार्गदर्शिकामा वस्तुसँग अपरिचित हुनुहुन्छ। एननोनिक उपकरणहरू जस्तै एन्कोनक्स्स वा गीतको प्रयोग गरेर सबै चीजहरू याद गर्नुहोस् ।
यदि तपाइँसँग एक अध्ययन गाइड छैन भने, आफ्नो नोटहरू, ह्यान्डआउटहरू, क्विजिजहरू, र टेस्टमा भएका चीजहरू हेर्नको लागि पुस्तकलाई हेर्नुहोस्। शिक्षकहरूले कक्षामा पहिले नै प्रस्तुत गर्नुभएको सामग्रीबाट परीक्षा सिर्जना गर्दछ, त्यसैले तपाईंको व्याख्यान नोटहरू अमूल्य छन्। नोनोमिक उपकरणहरूसँग टिप्पणीहरू याद गर्नुहोस् । धेरै टिप्पणीहरू लिईएन? परीक्षणमा राखिएको प्रत्येक अध्यायको अन्तिम दुई पृष्ठहरू हेर्नुहोस्, र आफैलाई समीक्षा प्रश्न सोध्नुहोस्। प्रत्येक अध्यायको पहिलो दुई पृष्ठमा हेर्नुहोस्, र प्रत्येक उपशीर्षकको बारेमा आधारभूत जानकारी सिक्नुहोस्। प्रश्नोत्तरी प्रश्नहरू सम्झनुहोस्, र वस्तुहरू तपाईंलाई कक्षामा दिए।
तपाईं प्रश्नोत्तरी गर्न अध्ययन साझेदारलाई सोध्नुहोस्।
आफ्नो आमा / सबैभन्दा राम्रो मित्र / भाइ / कसैलाई भेट्नुहोस् र तपाईसँग यो सामग्रीमा तपाईंसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ। उनीहरूले तपाईलाई प्रश्नहरू आगो लगाउँछन् र चाँडै जवाफ दिन्छन्, तपाईंले अचम्म लाग्नु भएको वा सम्झन सक्ने कुनै पनि सूचीको सूची बनाउनुहुन्छ। एकपटक तपाईं क्विज गरिसकेपछि, तपाईंको सूची लिनुहोस् र त्यो सामग्री पढ्नु भएपछि सम्म तपाईले पाउनुभयो।
एक द्रुत समीक्षा पाना बनाउनुहोस्।
तपाईंको सबै नोनोमिक उपकरणहरू , महत्त्वपूर्ण मितिहरू, र कागजका एक पानामा छिटो तथ्यहरू लेख्नुहोस्, त्यसोभए तपाईंले ठूलो परीक्षा अघि भोलि बिहान यो सन्दर्भ गर्न सक्नुहुन्छ।
कुनै पनि चीजले तपाईलाई सब-न्यानो खींचेर भन्दा परीक्षणमा नराम्रो बनाउनेछ। मलाई यो भरोसा गर्नुहोस्। तपाईं सबै रात र क्रैम जित्न सकेसम्म जित्न को लागी प्रलोभन हुन सक्छ, तर सबै माध्यम ले, केही रात अघि अघि सुत्नुहोस्। जब यो समय परीक्षण गर्न आउछ, तपाइँले तपाइँलाई थाहा भएको सबै जानकारी सम्झन सक्नुहुन्न किनभने तपाईंको दिमागलाई जीवित मोडमा प्रकार्य हुनेछ।
टेस्ट डे, स्किच पेक्स तपाईंको समीक्षा पानामा।
जब तपाईं आफ्नो लकरमा जाँदैहुनुहुन्छ, जब शिक्षक शिक्षक सुरू गर्न प्रतीक्षा गर्दै हुनुहुन्छ, दोहोरो खानाको लागि तपाईंको बाटोमा, आदि, नुन र परीक्षणको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जानकारी एक साथ राख्नुहुन्छ कि समीक्षा गर्नुहोस्।
तर, परीक्षण पानालाई परीक्षा भन्दा पहिले टाढा राख्नुहोस् । तपाईं पढाई गर्न सबै समय पछि धोखाधडी गर्न शून्य प्राप्त गर्न चाहँदैनन्!
Kaplan MCAT पाठ्यक्रमहरू
लेखकको उद्देश्य के हो?
GMAT स्कोरहरू शीर्ष व्यवसायिक विद्यालयका लागि
हाइ स्कूल शिक्षकहरूको लागि शीर्ष 10 गिफ्टहरू
7 तपाईको व्याख्या स्कोर बर्बाद गर्न सक्ने सामान्य व्याकरण गल्ती
मानकीकृत परीक्षणको दिनमा के गर्ने छैन
20 तपाईंलाई मदत गर्ने उद्धरणलाई प्रेममा पतनको विवरण चिन्ह हेर्नुहोस्
50 औं जन्मदिन
ख्रीष्टियनहरू कसरी तनावको सामना गर्छन्?
फायराराम र अमेरिका संघीय एजेन्सीहरूको आक्रोशित प्राधिकरण
स्टेलर सागर गाय
एलिजाबेथ बार्वरी: मास हत्या या हत्यारा?
विगतका निरन्तर कार्यपत्रहरू
पहिलो प्लेब्याक म्यागजिन
मध्ययुगीन अवधिबाट आधुनिक फिनिनस्ट ग्रंथबाट लिलिथ
तपाईंको फ्रांसीसी उच्चारण सुधार गर्न सुझावहरू
रसायन विज्ञान मा डिग्री संग तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ?
इंदिस्किट र इंडिस्किट
नोभेम्बरको लागि प्रार्थना
फ्रान्सेली वंशावली रेकर्ड्स अनलाइन
धर्मविरुद्ध बनाइएको धार्मिक
'80s को अधिकतर प्रामाणिक देश संगीत कलाकार
मलाई कुकुरा नबोल्नुहोस् - कौगर स्टेरियोटाइप अस्वीकार गर्नुहोस्
धन्यवाद धन्यवाद को लागि प्रेरणात्मक उद्धरण संग पल्ट उठो
पर्ची ढलान (तार्किक भ्रम)
हेनरी स्टील ओल्कोटको अनलक जीवन
बैले मजा लिदै
अनिवार्य हेटोस्कोक्सिटी भनेको के हो?
शीर्ष अलबामा कलेजहरू
फोनिक्स आधारित निर्देश